Mogadishu Journal » 2017 » October » 9
Mjournal :-Waxaa magaalada Kismaayo ka furmay shir aan caadi ahayn oo ay leeyihiin madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed ee xubnaha ka ah federaalk. Shirkan kama qeybgalayso dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish oo BBC-da...
Mjournal :- Madaxweyne Ku-xigeenka Maamulka Puntland Eng C/llaahi Cumar Camey ayaa beeniyey in wax khilaaf ah ka dhex jiro madaxda Puntland gaar ahaan isaga iyo madaxweyne Gaas. Camey oo fasax ku jooga dalka Zambia ayaa ku tilmaamay war aan sal iyo raad lahayn wararka sheegaya in...
Mjournal :- Magaalada Kismaayo ee Xarunta Maamulka Jubbaland waxaa maalintii labaad ka socda shirka Madaxda maamul gobaleedyada oo xalay halkaas ka furmay. Madaxda ka qeyb galaysa, shirka ayaa maanta doodo adag ka yeeshay ajendaha laga wada hadlayo oo ah khilaafka dowlada dhexe...
Mjournal :- Danjiraha gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Danjire Micheal Keating ayaa ugu baaqay Madaxda Sare ee Galmudug in ay wadahadal ku dhameeyaan Khilaafka ka dhex taagan. Waxaa uu sheegay in ay muhiim tahay in si wadajir ah looga wada...
Askar ka tirsan ciidamada Puntland oo xalay weerar lagu dilay
Mjournal :-Kooxo hubeysan ayaa xalay weerar ku qaaday Koontarool ku yaala duleedka magaalada Boosaaso, oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan Maamulka Puntland. Wararka ayaa sheegaya in iska hor imaad muddo socday uu ka dhacay koontaroolka, waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac....
Warar ku saabsan Sarkaal lagu dhaawacay Muqdisho
Mjournal :-Koox hubeysan ayaa saakay weerar ku qaday Gaari uu watay C/laahi Shiikh Cumar oo la sheegay in uu yahay sarkaal ka tirsan Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Dowladda Federaalka. Weerarka ay ku qaadeen Kooxda hubeysan sarkaalkan ayaa waxaa ka soo gaaray dhaawac...
Ra’iisal wasaare Kheyre oo ka qeybgalay munaasabad lagu taakuleynayay ciidamada qalabka sida
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalayka qeyb galay munaasabad lagu soo bandhigayay wixii u qabsoomay Guddiga Taakuleynta Ciidanka qalabka sida, ee dhowaan uu magacaabay Madaxweynaha. Guddiga ayaa sheegay inay diyaariyeen...
Warar ku saabsan shirka Kismaayo ee maamul gobolleedyada dalka
Mjournal :-Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa maalinkii labaad ka socda shirka Madaxda maamul goboleedyada, kaasi oo xalay ka furmay Guriga Martida ee Jubbaland. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa shirkan furay,...